थप १० जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट, कुन-कुन जिल्लामा जडान हुँदैछ ? « Deshko News
थप १० जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट, कुन-कुन जिल्लामा जडान हुँदैछ ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभर ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने अभियान अन्तर्गत थप १० जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गतका सात जिल्ला र प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गतका तीनवटा जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानका लागि अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकबाट आवेदन माग गरेको हो ।
अभियान अन्तर्गत ७ नम्बर प्रदेशमा ‘प्याकेज ए’मा दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी रहेका छन् । सोही प्रदेशको ‘प्याकेज बी’ अन्तर्गत अछाम, बझाङ् र बाजुरा रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश तीन अन्तर्गत ताप्लेजुङ्, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेका छन् । यी जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन आवेदन माग गरिएको हो –प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले यसअघि प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका सबै जिल्ला र कर्णाली क्षेत्रका आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने प्रक्रिया अघि सारेको छ । यसपटक थप गरिएका १० जिल्लामा सेवा प्रदायकले अप्टिकल फाइबर अथवा माइक्रोवेभ मार्फत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने सक्ने प्रावधान प्राधिकरणले राखेको छ ।
कम्तीमा ५१२ केबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तोकिएका जिल्लामा पुर्याउनुपर्छ –अर्यालले भन्नुभयो । आवेदन दिने सेवा प्रदायकले इन्टरनेटका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा दुई वर्ष सम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेटसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सम्बन्धित जिल्लाका सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नै दिइएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो । अाजको गाेरखापत्रमा खबर छ ।